သူမ ရဲ့ ကောက်ကြေ ာင်းအလှကို ထင်ပေါ် စေတဲ့ ပုံလေးတွေ တင်ပေးလိုက် တဲ့ မေပန်းချီ – GaMone Media
သူမ ရဲ့ ကောက်ကြေ ာင်းအလှကို ထင်ပေါ် စေတဲ့ ပုံလေးတွေ တင်ပေးလိုက် တဲ့ မေပန်းချီ
By Ga MonePosted on December 18, 2020
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မေပန်းချီကတော့ အမိုက်စား ခန္တာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှတွေ နဲ့ တည်ငြိမ် ရင့်ကျက်တဲ့ မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူမဟာ နာမည်ရ မင်းသမီးတွေထဲကတစ်လက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူးနော်။ ဗီဒီယို တွေခေတ်စားခဲ့တဲ့ ကာလမှာလည်း ပရိတ်သတ်တွေတစ်ခဲနက် အားပေးမှု ဝန်းရံမှုတွေကိုရရှိခဲ့တာပါ။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း အပြစ်ပြောစရာ မရှိအောင် ဆေးစက်ကျရာအရုပ်ထင်အောင် အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ပုံဖော်နိုင်သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။
အရမ်းမိုက်တဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတွေကို ပေါ်လွင်စေတဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ဖက်ရှင် မျိုးလေးတွေ ကို များသောအားဖြင့် ဝတ်တတ်တာကြောင့် ပုရိသတွေ ရဲ့ အာရုံစိုက်အားပေးမှုတွေကိုရရှိထားခဲ့ပါတယ်နော်။
ဒီနေ့မှာလည်း ကောက်ကြောင်းအလှပေါ်လွင်နေတဲ့ ပုံတွေကို တင်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စား ခန္တာကိုယ်ကောက်ကြောင်း အလှတွေပေါ်လွင်နေတဲ့ ဖက်ရှင်အမိ အမိုက်တွေနဲ့အတူ ” လာခိုးတော့မှာလား? ဒီညမင်းနဲ့ဆိုရင် အထုတ်မပြင်ဘူး အဝတ်တစ်ထည် ကိုယ်တစ်ခုပဲ😝😝😝😝” ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့ပုံတွေကိုတင်လာခဲ့တာပါ။ အရမ်းလန်းတဲ့ မေပန်းချီ ရဲ့ ပုံလေးတွေကို ပရိသတ်ကြီး အတွက် ဝေမျှပေး လိုက် ပါတယ်နော်။
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ ေမပန္းခ်ီကေတာ့ အမိုက္စား ခႏၲာကိုယ္ေကာက္ေၾကာင္းအလွေတြ နဲ႔ တည္ၿငိမ္ ရင့္က်က္တဲ့ မ်က္ႏွာေလးကိုပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ သူမဟာ နာမည္ရ မင္းသမီးေတြထဲကတစ္လက္ဆိုလည္း မမွားပါဘူးေနာ္။ ဗီဒီယို ေတြေခတ္စားခဲ့တဲ့ ကာလမွာလည္း ပရိတ္သတ္ေတြတစ္ခဲနက္ အားေပးမႈ ဝန္းရံမႈေတြကိုရရွိခဲ့တာပါ။ သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္းမွာဆိုရင္လည္း အျပစ္ေျပာစရာ မရွိေအာင္ ေဆးစက္က်ရာအ႐ုပ္ထင္ေအာင္ အေကာင္းဆုံးသ႐ုပ္ေဆာင္ပုံေဖာ္ႏိုင္သူတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
အရမ္းမိုက္တဲ့ ေကာက္ေၾကာင္းအလွေတြကို ေပၚလြင္ေစတဲ့ ဆက္ဆီက်က် ဖက္ရွင္ မ်ိဳးေလးေတြ ကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ဝတ္တတ္တာေၾကာင့္ ပုရိသေတြ ရဲ႕ အာ႐ုံစိုက္အားေပးမႈေတြကိုရရွိထားခဲ့ပါတယ္ေနာ္။
ဒီေန႔မွာလည္း ေကာက္ေၾကာင္းအလွေပၚလြင္ေနတဲ့ ပုံေတြကို တင္ေပးလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အမိုက္စား ခႏၲာကိုယ္ေကာက္ေၾကာင္း အလွေတြေပၚလြင္ေနတဲ့ ဖက္ရွင္အမိ အမိုက္ေတြနဲ႔အတူ ” လာခိုးေတာ့မွာလား? ဒီညမင္းနဲ႔ဆိုရင္ အထုတ္မျပင္ဘူး အဝတ္တစ္ထည္ ကိုယ္တစ္ခုပဲ😝😝😝😝” ဆိုတဲ့စာသားေလးနဲ႔ပုံေတြကိုတင္လာခဲ့တာပါ။ အရမ္းလန္းတဲ့ ေမပန္းခ်ီ ရဲ႕ ပုံေလးေတြကို ပရိသတ္ႀကီး အတြက္ ေဝမွ်ေပး လိုက္ ပါတယ္ေနာ္။
Previous post ကြက်တောင် ရိုက်ရင်း မျက်လုံး ထိခိုက်မိသွားတာကြောင့် မျက်စိ ခွဲစိတ်မှုအထိပါ ပြုလုပ်ရမယ့် နီလန်း
Next post ခပ်မိုက်မိုက် ဘော်ဒီလေး ကို ထိန်းထားနိုင်ဖို့ အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ မနားမနေ လုပ်နေတဲ့ ဖွေးစိန်လေး ရဲ့ ဗီဒီယို